1 Mianara manao programa amin'ny fomba mora indrindra
2 Grasshopper ho fampiharana mahafinaritra
3 Vahao ny Puzzles rehetra mba ho lasa programmer
Mianara manao programa amin'ny fomba mora indrindra
Grasshopper dia tena mifototra amin'ny lalao kely izay tokony handehananao amin'ny ambaratonga samihafa rehefa mampivelatra ny fahaizanao ianao. Izany hoe, toy ny lalao hafa, hiakatra ianao rehefa vitanao ny fanao rehetra apetraka amin'ny efijery.
Grasshopper ho fampiharana mahafinaritra
Grasshopper koa dia manana interface efa vonona ho anao handalo avy eo amin'ny sisiny manomboka amin'ny fitetezana ka hatrany amin'ny lohahevitra didaktika toa ny "What is programming" na ny lafiny lehibe amin'ny fiteny fandaharana toa ny JS. Hakatona io fandaharam-potoana io rehefa mamaky ny dingana vao manomboka isika.
Ny lesoka fotsiny dia mila fantatrao a anglisy kely mba hampihatra ny lesona tsirairay. Tsy ilaina koa ny Anglisy mandroso, satria saika ataon'ny piozila mazava tsara ny zava-drehetra, raha vakiantsika tsara ny famaritana; indrindra rehefa mandalo ny ambaratonga samihafa an'ny vao manomboka isika.
Ohatra, a Ny piozila hamahana dia ny fahalalana mampiasa ny raha-hafa araky ny valiny nomen'ny vola madinika natsipy teny amin'ny rivotra. Tokony ho fantatsika ny fomba fampidirana raha-tsy izany, raha diso ny valiny dia mamela antsika hiditra kaody bebe kokoa. Grasshopper dia mametraka ohatra foana ho anao harahina ka tsy maintsy ampiharinao amin'ny fanovana vitsivitsy fotsiny. Ity dia fomba mora hitazonana ireo lafiny manan-danja indrindra amin'ity fiteny fandaharana ity.
Vahao ny Puzzles rehetra mba ho lasa programmer
Ny tsara indrindra amin'ny Grasshopper dia ny hanananao bokotra maromaro miaraka amin'ireo fiasa tena lehibe mba hahafahanao manomana ilay kaody. Hanana ny bokotra isika miteraka famotopotorana ho an'ny Grasshopper raha voasoratra tsara ny kaody, ary noho izany dia mila mamerina azy io raha tsy marina tanteraka.
Raha tafiditra ao anaty piozila isika, hatrany afaka misintona ny fanampian'ny Grasshopper isika mba hahafahanareo milaza aminay ny famantarana bebe kokoa hamahana izany. Hanolotra anao ihany koa ny vahaolana, na dia amin'ity fandaharana ity aza dia zava-dehibe ny mihinana kely ny lohanao mba hahitantsika ny vahaolana. Hahatonga antsika hampakatra ny isa ho toy ny programmer ary ny zavatra ianarana rehetra dia mijanona ao anaty fitadidiana.
Valala: Mianara kaody
Ny sary voalohany an'ny Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018) tsy misy bokotra ara-batana dia voasivana